Dalalka ugu farxadda badan dunida 2020 oo la shaaciyey
Dalka Finland ayaa sanadkii saddexaad oo xiriir ah nqoday dalka ugu farxadda badan caalamka, sida lagu sheegay warbiixn maanta soo baxday.
Cilmi-baarayaasha Warbixinta Farxadda Adduunka (World Happiness Report) ayaa weydiiyey dadka 153 dal inay qiimeeyaan heerka farxaddooda. Qiimeynta ayaa lagu saleeyey arrimo ay ka mid yihiin dhaqaalaha dalka, taageerada bulsho, xoriyadda qofka iyo heerka musuq-maasuqa, si dal walba loo siiyo dhibcaha farxadda.
Si la mid ah toddobaadii warbixin ee horey, waxaa warbixinta sideedaad ku badan dalalka Nordic la isku yiraahdo, oo toddoba ka mid ah ay galeen 10-ka kaalin ee ugu horreeya
Dalalka ugu farxadda badan adduunka ayaa ah kuwa “dadkooda ay dareemaan inay wax ku leeyihiin, oo ay is-aaminaan, islamarkaana ay ku raaxeystaan hay’adaha ay wadaagaan,” waxaa sidaas yiri John Helliwell, oo ka mid ah qorayaasha warbixinta.
Dalalka kaalimaha hoose ka galay warbixintan ayaa ah kuwa ay saameeyeen dagaallada iyo saboolnimada xooggan, ayada oo Zimbabwe, Koonfur Sudan iyo Afghanistan ay noqdeen saddexda dal ee ugu farxadda liita.
Finland ayaa waxaa ku xiga dalalka Denmark, Switzerland, Iceland iyo Norway, waxaana tobanka dal ee ugu farxadda badan caalamka ay kala yihiin: 1. Finland, 2. Denmark, 3. Switzerland, 4. Iceland, 5. Norway, 6. Netherlands, 7. Sweden, 8. New Zealand, 9. Austria, 10. Luxembourg.
Tobanka dala ee ugu hooseeyaa liiska, ayaa kala ah: 144. India, 145. Malawi, 146. Yemen, 147. Botswana, 148. Tanzania, 149.Central African Republic, 150. Rwanda, 151. Zimbabwe, 152. South Sudan, 153. Afghanistan.